SIDEE KU HANANKARTAA QALBI KAA JANJEERA ? | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
SIDEE KU HANANKARTAA QALBI KAA JANJEERA ?
‏Dunidaan aynu guudkeeda saaranahay waxa ku nool qomiyado kala duwan kuwaas oo aan isku diin, isku af, iyo isku dhaqan toona ahayn, balase wax ay kawada siman yihiin jaceylka, hinaasaha ama maseyrka iyo waxyaaba kale.
Qarniyadii hore jaceylka waxaa uu ahaa mid ay dadku aad u qadariyaan aadna u qiimeeyaan. Waxaynu ognahay in dad badan ay u dhinteen jaceylka halka kuwa kalana dhibaatooyin badan kala kulmeen.
Dadka baalka lama ilaabaanka ah ka galay taariikhda jaceylka waxaa ka mid ah jaceylkii Cilmi boodhari iyo Hodan, Qeys iyo leyla, Cantar iyo ceebla.
Qarnigaan aynu ku jirno dad badani waxa ay aaminsanyihiin in jaceylku yahay wax jira, halka kuwa kalana ay u heystaan in jaceylku uu yahay wax aan jirin oo ku kooban afka oo kaliya oo aanan uurka jirin. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in jaceylku yahay wax jira kaasi oo ka bilowda ka helitaan iskuna bedela dareen ku abuurma qofka qalbigiisa, dadka aaminsan in jaceylku aan ahayn wax aan jirin waxaan dhihi karnaa waa kuwa aan fahansaneyn wax uu yahay jaceylka oo aan wali wax jeclaan.
Inta aanan ugudbin dulucda maqaalka oo ah (sidee ku kasbankartaa qalbi kaa janjeera?) ayaa waxa laga yaabaa in ay dad badani, is weydiinayaan su,aasha ah waa maxay qalbi kaa janjeera?
Qalbi kaa janjeera waa qof aad gaclootay oo isagana aanan u soo jeedin jaceylkaaga ama ku mashquulsan qalbi kale.
Dhalinyaro badan ayey arintaani lasoo gudboonaatay kuwaasi oo qaarkood ku degdegay in ay u soo bandhigtaan jaceylkooda qofkii ay jeclaadeen iyagoo aan isweydiin maxaa kaaga imaan kara.
Waxa dhacda inta badan in qofkii ay u soo bandhigteen jaceylkooda uu soo dhaweeyo soo dhaweyn aan uurka jirin balse ay katahay niyad dhis, iyadoo qofkii jaceylka hayayna uu u qaato inuu ku guuleystay jaceylkiisa oo uu helay qalbigii uu gaclooday.
Laakiin muddo ka dib ayuu ogaadaa in uusan helin jaceylkiisa oo uu ku guul dareystay kasbashada qofkii uu qalbigiisa u taamayay.
Taasina waxa ay sababtaa niyad jab weyn iyo iyadoo qalibigiisu soo gaadho dhaawac xanuun badan.
Qaar kale oo ka mid ah dhalintaan waxaa ay danta ku kaliftaa in ay qarsadaan jaceylkooda intii ay guul daro iyo xumeyn kala kulmi lahaayeen u soo bandhigida qofkii ay jeclaadeyn.
Taasina ma ahan mid uu qalbigooda ku bogsanayo, waxaana kusii kordhaya jaceylka iyo rabitaanka uu u qabo qofka uu jacelyahay, Soomaaliduna waxa ay ku maahmaahdaa waxaad qarsato weey ku qarsadaan.
Hadaba aqristoow hadii ay kula soo gudboonaato arintaan oo kale oo aad weydo sidii aad u heli lahayd ama ku kasbanlahayd qofka aad jeceshahay qalbigiisa, waxaad kaga bogankartaa dulucda maqaalka oo ah Sidee ku kasbankartaa qalbi kaa janjeera?). Sidaaad ku kasbankarto qalbi kaa janjeera wey fududahay hadii aad sameeyso shuruudahaan soo socada.
1.Ugu horeyn hanoqon qof ku degdega u bandhigida ama ugudbinta qofka aad jeceshahay fariiintaada jaceylka.
5.Hadii aad tahay gabadh ama wiil ku dadaal sidii aad u ogaan laheyd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwadiisu tahay adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay, Balse raadi wada kale oo aad ku ogaan karto sida adigoo ka wareysanaya saaxiibkii ama saaxibadeed adigoo aan lagaa dareemin u jeedkaadu waxa uu yahay.
7.Ogoow jaceylku indha malahan, Qofka uu qalbigaagu raacay hadii uu yahay qof balwadiisu wanaagsaneyn ku dadaal sidii aad uga waanin laheyd adigoo hadalo macaan kulahadlaya.
8.Qofka aad jeceshahay hadii uu yahay qof kaa fog oo aad laba wadan ku kala nooshihiin ku dadaal sidii aad u xiriirin laheyd mar walba adigoo telifoon kula hadlaya ama waraaqo lagu xardhay ereyo qalbiga u roon ugu diraya aalada casriga ah ee internetka.Hadiise aad hal wadan wada joogtaan, ama aad meel kawada shaqeysaan waa inaad mar walba ku soo dhaweysaa waji furan oo ay farxadi ka muuqato.
12.Kudadaal in aad u hadiyadeyso qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo.Ogowna hadiyadeynta waxey qeyb libaax leh ka qaadataa kobcinta jaceylka.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa qoraalkeyga in aad dhalinyahay noqotaan kuwa ka fogaada waxyaabaha xunxun ee ay reer galbeedka ku dhaqmaan oo aanay diinteena islaamka waafaqsaneeyn
Nasra mahamud elmi (Nasra Degan)
Comment by idileey on August 11, 2011 12:23 am
mansha allah walalayal waa mahad santiihin dhamantiin meel kasto ad joogtan mar labad waa mahad santiihin
Saamiyo iyo axmed mar uu waqtiga dhamaadey cawrada kala leexi ?